Warshadaha tiirarka dhalaalaya ee Shiinaha 'Photoluminescent glaze' iyo soosaarayaasha | Grand Luminous
Daloolka glazeumka ee 'Photoluminescent glaze'
Guryaha iftiinka badan waxay ka dhigayaan kuwa marlabaad soo jiita.
Iftiimin: Jell-cagaar, buluug-cagaaran, Sky-buluug .Sanays loo habeeyay iyadoo la raacayo shuruudaha macaamiisha.
1. Single dhalaalaya saqafka dhoobada
2. Dusha sare oo dhalaalaysa oo leh sawir daabacis gargaar ah
3. Midabada dhalaalaya iftiinka dhoobada dhoobada ah
4. Ka bax calaamadda darbiga ama sagxada la dul saaray
Xalaasha dhoobada nalka leh waa badeecad nal iftiin leh oo loo isticmaali karo aqoonsiga amniga iyo qurxinta dhismaha. Codsiga aagag kaladuwan waxay noqon karaan derbiga, sagxadda, jaranjarooyinka iyo shaqo farshaxan oo ku taal maktabadda. Qaar badan oo ka mid ah dhoobadayada iftiin ee iftiinka leh ayaa sidoo kale ku habboon dhismaha oo isku daray hab-socodkii caadiga ahaa ee shaqada iyo tikniyoolajiyadda casriga.
Waxay soo bandhigaan saameynta iftiinka waarta, antiseptik, waarta, iyo xasilloonida kiimikada. Markaad nuugto waxoogaa iftiin muuqda sida iftiinka qorraxda tooska ah 10-20 daqiiqo, oo si iskiis ah u shid 8 saacadood ~ 12hours. Alaabtu ma ahan oo keliya ujeedka qurxinta laakiin waa tixgelinta amniga sidoo kale.
Astaamaha iyo Adeegsiga Sawirrada Xargaha Sawirbaradka Luminescent Ti
1. Tiirarka dhogorta leh ee loo yaqaan 'Photo luminescent Ceramics Tiles' waxaa la soo saaray iyadoo lagu daray midabaynta sawirrada iftiinka lumiya ee sawirrada dhoobada caagga ah iyo galaaska. Marka loo barbar dhigo dhoobada caadiga ah iyo galaaska, alaabada waxay iftiimin karaan mugdiga kadib markay nuugaan nalalka la arki karo, kuwaasoo ka dhigaya dhoobada iyo muraayadaha si aad ah u ballaaran. .
2.Maqaarka sawirka leysku qurxiyo wuxuu nuugi karaa nalal kala duwan oo muuqda ilaa uu ka buuxsamo, ka dib wuxuu iftiimi karaa mugdiga si joogto ah, dib u isticmaal aan xadidneyn oo leh waqti dheer kadib iftiinka, nalalka dhaadheer, oo toban jeer dhalaalaya walxaha qadiimka ah. Maaddadu waa ka madax bannaan shucaac, maahmaah aan waxyeelo lahayn oo aan dhib lahayn.
3. Nalalka iftiinka degdegga ah ee hooseeya ayaa hagi kara dadka inay u qaxaan si habsami leh xaaladaha degdegga ah waxayna yareeyaan jahwareerka aan ahayn badbaadinta tamarta.
4. Codsashada dhoobada sawirrada ee guryaha guryaha iyo dhismayaasha dadweynaha ma qurxin karaan oo qurxin karaan guryaha iyo deegaanka shaqada, laakiin waxay kaloo u keeni karaan deggeneyaal dheeraad ah deggeneyaasha marka ay mugdi mugdi ku jirto.
5. Xaraashka sawir qaade ee sawir qaaduhu wuxuu sii deyn karaa hirarka iftiinka dhererka oo cayiman, kaasoo xaddidi kara noocyo yar-yar oo wax -yeellada iyo cudurada. Astaamihiisu waa mid la jaan qaadaya fikirka nololeed ee moodada iyo caafimaad qabka ah ee loogu talagalay dadka casriga ah ayagoo adeegsanaya badeecada jikada iyo qolka qubayska.
6. Xaraashka sawir qaade ee sawir qaade waa astaamo huwan, iska caabin goos goos ah, dib u gurasho dab, iska caabin gabow ah kana xor ah shucaaca marka loo barbar dhigo agabyada kale ee dabiiciga ah, taas oo si ballaaran looga isticmaalo guryaha guryaha iyo dhismayaasha dadweynaha.
Hore: Mashiinka Mobiic-ka Miisaanka leh ee Luminescent Pebble
Xiga: Dhalada Photoluminescent